मोबाइल खरिद गर्दा जान्नै पर्ने मुख्य ३ कुराहरु « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
मोबाइल खरिद गर्दा जान्नै पर्ने मुख्य ३ कुराहरु
२२ पुष २०७२, बुधबार १६:३५
१. धेरै सस्तोको पछि नलाग्नुस्
धरै सस्तो फानको पछि नलाग्नुस् । आफूले किन्न सक्ने फोन लिएको राम्रो । किनीसकेपछि केही लामो समयसम्म टिक्ने फोन किन्दा नै बेस हुन्छ । संभव भएसम्म फोनको अर्को अपग्रेड नआउन्जेल काम गर्ने गुणस्तरिय क्यामेरा र प्रोसेसर भएको लिनुपर्छ । त्यसैगरी ब्याट्रीको क्षमता पनि हेनुहोस् । उच्च क्षमताका फोनहरु जस्तो आइफोन सिक्स वा सामसुङ एस फाइभ किन्ने सोचमा हुादा सुरुमा महंगो लागे पनि यिनीहरु तपार्इाले लामो समय साथमा राख्न सक्नुहुनेछ । समयसागै यिनमा लगानी गरेको प्रतिफल पनि अवश्य दिने गर्दछन् र वषौसम्म राम्रोसाग चल्दछन् ।
२. खरिद गर्न चाहेको फोनका विशेषताहरु थाहा पाउनुहोस्
तपार्इाले चाहेको फोनका विशेषता र क्षमताका बारेमा जानकार हुानुहुन्छ भने नचाहेका वा आवश्यक नपरेका विशेषताका लागि ठूलो रकम खरिद गरिरहनु पर्दैन । जस्तो सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एजमा सबै कुरा छन्– घुमाउरो स्क्रिनका साथै यसको आफ्नै इन्टरफेस र न्याभिगेसन कन्ट्रोल रहेको छ । तर तपाई यसमा रहेको पेन वा नयायुआइ प्रयोग गर्नुहुन्न भने यो मंहगो फोनमा धेरै खर्च गर्नुहुदैछ ।
३. उपयुक्त डिजाइन रोज्नुहोस्
बाजारमा थरि–थरिका डिजाइनमा फोनहरु आएका छन् । तपार्इा त्यस्तो डिजाइन छान्नुस् जुन तपार्इको व्याक्तिगत स्टाइललाई समेत सुहाउादिलो होस् । फोनमात्र त्यस्तो साधन हो जुन हामीले जहा जाादा पनि आफूसगै बोकेर लाने गर्दछौ । यो संगै तपाईले आफ्ना महत्वपूर्ण क्षणहरु विताउनुहुने भएकाले डिजाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुस् ।
लिभिङ विथ अाइसिटी बाट
प्रकाशित : २२ पुष २०७२, बुधबार १६:३५